WINDOWS7မှာအမှား 0X80070422 FIX လုပ်နည်း - WINDOWS ကို - 2019
7 ကို Windows အတွက်ကုဒ် 0x80070422 အတူအမှားများ၏အကြောင်းရင်းဖယ်ရှားပစ်
အေးခဲ - နေမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ lingers တဲ့ငြိမ်ရုပ်ပုံလွှာ။ တကယ်တော့ဒါဟာအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့် Sony ကဂတ်စ်သင်ခန်းစာအတွက်တည်းဖြတ်ရေးဘယ်လိုမစိုက်ထိုသို့ပြုမှသငျသညျသင်ပေးပါလိမ့်မယ်။
Sony က Vegas မှာတစ်နေတုန်းပါပဲပုံရိပ်ကိုဖမ်းယူဖို့ကိုဘယ်လို
1. ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာစတင်ရန်သင်အချိန်ဇယားအပေါ်တစ်ဦးနေဆဲပုံရိပ်ဖမ်းယူချင်ဘယ်မှာဗီဒီယိုဆွဲယူပါ။ စတင်အဘို့, သင်တစ်ဦး preview ကိုထူထောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ > "အပြည့်အဝအရွယ်အစား" - drop-down menu က "ကို Preview အရည်အသွေး" ဘယ်မှာ select လုပ်ပါ "အကောင်းဆုံး" နေရာချထားဖို့ပြတင်းပေါက် "ဗီဒီယိုကို Preview" ခလုတ်ကိုရဲ့ထိပ်မှာ။
2. ထိုအခါအချိန်ဇယားပေါ်, သငျသညျအငြိမ်အောင်ထို့နောက် preview ကိုပြတင်းပေါက်၌ floppy disk ပေါ်မှာ click နှိပ်ချင်သည် frame ရန် slider ကိုရွှေ့။ ဒါကြောင့်သင်ကလျှပ်တစ်ပြက် ယူ. * .jpg format နဲ့ရုပ်ပုံသိမ်းဆည်းပါ။
3. ဖိုင်ကိုသိမ်းဆည်းဖို့တည်နေရာတစ်ခုရွေးချယ်ပါ။ အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ပုံလွှာသည် "အားလုံးမီဒီယာ" တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
4.ယခုတွင်သင်သည်ကျနော်တို့ပုံကိုယူရှိရာအချက်မှာ "S" ကို key ကိုသုံးပြီးအစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုသို့ဗီဒီယိုဖြတ်, နှင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ image ကိုပြန် paste နိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် "Freeze" ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ရပ်များ၏အကူအညီဖြင့်။
ဒါကအားလုံးပဲ! သငျသညျကို Sony Vegas မှာ "Freeze" ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ, ကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့အတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ သငျသညျစိတ်ကူးယဉ်ပါဝင်သည်နှင့်ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုကို အသုံးပြု. အချို့သောစိတ်ဝင်စားဖို့ဗီဒီယိုများဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။